Ukuphucula iindawo zakho zokuhamba ngeeGolati kwiindawo ezihamba ngee-Shoot 7-8-9
Amaninzi amaninzi ndimdlalayo ngokubetha ibhola kakuhle kwi-tee ukuya eluhlaza, kodwa xa efika kwiiyure ezingama-50 zoluhlaza, ebonakala eluhlaza, kubonakala kunzima. "Anginaso ixesha lokusebenzisa izibhamu," baxelele. "I-pros inexesha lonke ehlabathini ukuma kwaye isebenze kulezi zihlwele, ngoko zikhula zive."
I-7-8-9 Indlela i-drill for pitch shots efuna inzame encinane ekuqaleni, kodwa emva kokuba ubeke imida yakho uya kuba nako ukuxhomekeka kuyo kwikamva.
Ngezantsi, siza kuphonononga izikhundla ze-7, 8 neye-9 nesikhokelo kunye neengcebiso ezimbalwa eziqhelekileyo zokukhutshwa kweepaki.
Isikhundla se-7 O'Clock
Isikhundla se-7 kwinqanaba le-7-8-9 yokukhangela ukuchaneka komgama. Mel Sole
Qalisa ngokufanekisa iiyure zeeholide
Khawucinge nje xa ulungisa ibhola onayo iwashi enkulu phambi kwakho. Funda ukuguqula ingalo yakho yesobunxele (kwiigolisa ezisekunene) ukuya kwiiyure "iiyure" ezahlukahlukeneyo njengendlela yokulawula umgama kwiimfono zakho. Isikhundla sesi-7 sichazwe ngentla.
Isaziso kwisithombe esingentla ngentsimbi encinane. Oku kubalulekile njengoko ufuna ukukhanda isalathisi ukuze uncede ukuhambisa umgca ophantsi kwebhola.
Ziqhelanise ukubetha izibhamu ngokuthabatha iklabhu ukuya kwindawo ye-7 yeholo uze uqhube uqhube umgama othile. Oku kuya kuba yintsimbi yesi-7 kwiphitshi.
Isikhundla se-O'Clock 8
Isikhundla se-8 kwisithuba se-7-8-9. Ngobubele bukaMel Sole
Le yithuba lesithuba se-8.
Ziqhelanise ukushaya izibhamu ezitshintshisa ingalo yakho yasekhohlo ukuya kwi-8 yintsimbi kwaye uqaphele ukuhamba kwakho. Ukuzula nge tempo ehambelana kwaye uya kufunda ukuba umgama udibaniswe nesithuba sakho se-8. Oku kuya kuba yintsimbi ye-8 yeholide.
Isikhundla se-9 O'Clock
I-9 yesikhokelo kwindawo ye-7-8-9. Ngobubele bukaMel Sole
Le yithuba lesithoba.
Yenza okufanayo neentlobo ezimbini zokuqala, ngelixa uguqula ingalo yakho nge-9 ntsimbi.
Gqiba ukuguqula ingalo ukuya kwi-10 yintsimbi kwaye ngoku uya kuba nemida emine eya kuthi ungayigxina ibhola. Imida iya kuhluka kumdlali ukuya kumdlali njengama-shots apheleleyo, kodwa emva kokuba ubenzile uyenze indlela enokuzama-kunye neyonyaniso ekufuneka uyithembe ngayo.
Emva kokusebenza kunye ne-7-8-9 drill, uza kufumana iiyadhi ezingama-40 ukusuka kwiflegi kwikhosi kwaye ungathi kuwe, "Kulungile, nguyure ye-X yeholide." Kwaye ngoku uyazi ngokuqinisekileyo ukuba xa uguqula ingalo yakho kweso sikhundla, ibhola iya kuhamba malunga neeyadi ezingama-40.
ImiGaqo eSebenzi yePakch Shots
Ngamahlumela, gcina ubunzima bakho phambi kweenyawo kwidilesi. Ngobubele bukaMel Sole
Kukho imithetho emithathu ngokubanzi ebaluleke kakhulu kunye nebhodi lokutshiza.
1. Isisindo kwi-Foot Foot: Phawula ukuba kwidilesi ubuninzi bam ubunzima bam ngasekuqaleni kwamanyathelo. Oku kubalulekile ukukunceda ukuba ungagcini umzimba wakho kuphela ngexesha lokuguqula kodwa kukukunceda ukuba unike umonakalo ophantsi obalulekile ekudaleni i-backspin oyifunayo kule festile. Uyakujonga kwakhona ukhangela ezinye iindawo ngexesha lokubuyela emuva (kumaphepha adlulileyo) ukuba ubunzima bam abuyi kutshintshwa kwiinyawo zangasemva nanini na. Ndigcina ubunzima bam emagxeni angaphambili nakwicala lokubuya kwam. (Le nto kuphela yombhobho - kungekhona ukutsala okupheleleyo.)
2. Iintambo ezihambelanayo zokuSwayina: Kubalulekile ukuba ijubane lokuguquka lihlale liqhubekayo. Akunjalo ukuguquka ngokukhawuleza kwiprato enye kwaye ngokukhawuleza kulandelayo. Uya kufumana iziphumo ezingahambelaniyo. Zama ukucingela i-pendulum kunye nendlela ehamba ngayo emva kwaye ihambele ngendlela efanayo. Zama ukuzivakalelwa kuzo zonke izibhamu zakho.
Ukulandelelana kubalulekile ekutshitsheni kwamanzi. Ngobubele bukaMel Sole
3. Landela Ngoku: Njengoko ubona apha, kubalulekile ukulandela. Ungayeki ukulandela kwakho kule festile okanye uya kuhlala ufutshane. Oku kulandelayo kufuneka kugqitywe malunga ne-3 ntsimbi.
Landela ngokukhawuleza ekujoliswe kuyo ekujoliswe kuyo. Ngobubele bukaMel Sole
Kwaye ekugqibeleni, njengesithombeni esingentla, qiniseka ukuba ukulandelwa ngqo kukujoliswe ngqo kwaye kungekhona emzimbeni wakho. Izandla kufuneka zigqitywe malunga nephakathi kwesifuba sakho.
Gcina le mithetho emithathu ngokubanzi ekugxinineni engqondweni kwimimiselo yomibini kunye nexesha lokudlala.
Kwaye kunye nomsebenzi omncinane kwi-7-8-9 Drill ukuseka imida yakho yokumisa kunye ne tempo, uya kufumana ukuba unako ukulinganisa kangcono ukuhamba kweemfono zakho kwaye uphendule ngokufanelekileyo kwi- yardage efanelekileyo. Uza kufumana amanqaku amaninzi ukusuka kumaqabane akho okudlala njengathi "Ufunde phi ukukhawuleza ngokukhawuleza?"
I-Big-Screen Ifaka: 11 Flick Picks yamaFilimu eGalofu
Indlela yokusebenzisa iCallaway System Indlela yoLuntu lweSigqeba soKhuseleko lweSigqeba esingu-1
Iingcebiso ezikhawulezayo nezilula zokuqala kweGolfers kunye nabaSebenzi abaziPhakamileyo
Indlela Yokukhumbula Iimbali Zakho
I-Craps - Yonke Ngezibheyi zePhondo